Maxaa Ku Soo Kordhay: Liverpool Iyo Wararka Suuqa Kala Iibsiga Bisha June, Xiisaha Sergej Ee Kooxda Iyo Qodob Kale
HomeSuuqa kala iibsigaMaxaa ku soo kordhay: Liverpool iyo Wararka Suuqa kala iibsiga Bisha June, Xiisaha Sergej ee kooxda iyo Qodob kale
June 11, 2021 Suuqa kala iibsiga, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
ku soo dhawaada xubinta maxaa ku soo kordhay kooxdaada oo aan maanta ku soo qaadaneyno kooxda Liverpool iyo Wararka Suuqa kala iibsiga bisha June ee laga qoray.
Todobaadkan Xubinta Maxaa ku soo kordhay waxaa kaga hadleen kooxaha Horyaalka ingariiska kuwooda ugu waaweyn iyadoo shalay aan ku soo qaadaney Chelsea maanta waxaan eegeynaa Liverpool oo kaalinta 3aad ka gashay horyaalka.
Sida laga soo xigtay wargeyska Express , Liverpool ayaa diyaar u ah inay dib u soo cusbooneysiiso xiisaha ay u qabto Duje Caleta-Car.
Daafaca dhexe ayaa diirada u saarnaa Liverpool laakiin Marseille ayaa diiday dalabyadooda.
Sida laga soo xigtay Il Messaggero , Liverpool ayaa xiiseyneysa inay lasoo saxiixato xidiga Lazio ee Sergej Milinković-Savić.
Jürgen Klopp ayaa baadi goob ugu jira badalka Gini Wijnaldum.
Sida laga soo xigtay wargeyska Express , Leeds United ayaa ka baxday baacsiga loogu jiro da ‘yarka Liverpool Harry Wilson. Reds ayaa ku qiimeysay £ 17m, taas oo ka badan inta ay Caddaanka diyaar u yihiin inay bixiyaan.
Liverpool ayaa wadahadalo kumeelgaar ah la yeelatay Borussia Monchengladbach si ay suurtogal ugu noqoto inay xagaaga u dhaqaaqaan Florian Neuhaus, sida ay sheegayaan wararka.
24 jirkaan khadka dhexe ayaa haatan isku diyaarinaya inuu matalo Jarmalka Euro 2020 , iyadoo kooxda Joachim Low ay dooneyso inay ka soo baxdo Group F oo ay ku jiraan France, Portugal iyo Hungary.
Wariyaha Liverpool ee Liverpool Echo, Paul Gorst, ayaa ku tilmaamay isku xirkii u dambeeyay ee Reds iyo soo jiidasho xamaasad leh oo loogu talagalay Raheem Sterling inuu yahay ‘mid aan bilaaban. lakin waxa uu cadeyay soo laabashadiisa in ay tahay mid aanan dhici karin marka la eego wixii dhacay 2015 wixii ka danbeeyay markaasi oo xidiga uu ka tagay kooxda Reds.
Liverpool ayaa xiiseyneysa saxiixa garabka Bayern Munich Kingsley Coman, sida laga soo xigtay Fichajes .
Reds waxay soo martay xilli ciyaareed adag oo 2020/21 ah, laakiin wali waxay ku guuleysatay inay soo afjarto kaalinta seddexaad,
Guud ahaan waa naga intaasi xubinta Maxaa ku soo kordhay Kooxdaada ee Ciyaaro.com kala socotaan maalin kasta qeybta Bari iyo Kooxda xigta ee Arsenal.